Dagaal - Puntland Mirror Believable Media Website
[ January 18, 2019 ] Al-Shabaab oo caaruur ka badan 100 ka afduubatay gobolka Bakool	Somalia
[ January 17, 2019 ] Qatar oo baabuur gaashaaman ugu deeqday Soomaaliya	Somalia
[ January 16, 2019 ] Deni oo hakiyay dhammaan heshiisyada dowladda inta laga soo dhisayo golaha cusub ee wasiirada	Puntland
[ January 16, 2019 ] Madaxweynaha Kenya oo sheegay in weerarkii hutel Dusit ee Nairobi lasoo afjaray	East Africa
[ January 15, 2019 ] Huteel kuyaala magaalada Nairobi oo weerar lagu qaaday	East Africa
Sawirka: Askari katirsan ciidamada Puntland oo ku sugan tuulada Tukaraq.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray amar lagu hakinayo heshiisyada cusub ee dhammaan dowladda, barnaamijyada, iyo shaqaalaysiinta ilaa inta laga soo dhisayo golaha cusub oo wasiirada. Tan iyo doorashadii [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah wefdi ka socda shirkadaha Shiinaha ee Afrika kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada. Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada, kulanka ayaa [...]
Puntland oo sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ay ciidamada Somaliland ku dileen magaalada Laascaanood
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ciidamada Somaliland ay ku dileen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Isniintii lasoo dhaafay. “Dawladda Puntland waxay ka xun tahay Ardeydii 20-kii August ay ciidamo [...]
Golaha baarlamaanka dowlada Puntland oo u yeeray Madaxweyne ku-xigeenka Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka dowlada Puntland ayaa maanta u yeeray Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, sida uu Puntland Mirror u xaqiijiyay xubin kamid ah baarlamaanka. Xildhibaanada baarlaamka Puntland oo ku guda jira kala-fadhigooda 37-aad ayaa maanta fadhigooda [...]